September | 2017 | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop | Page 4
TIRE & WHEEEL
PROFESSIONAL REFINISH SYSTEM
ULTIMATE WAX SYSTEM
BACK-TO-BLACK TIRE RENEW
Warning: Undefined variable $post in /home/steadfastmm/public_html/wp-content/themes/steadfast/functions.php on line 76
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/steadfastmm/public_html/wp-content/themes/steadfast/functions.php on line 76
Mothers ၏ Back-to-Black တာယာသစ်လွင်ဆေးကို သန့်စင်စေသော အကောင်းဆုံးဓာတ်ကူပစ္စည်းများဖြင့် ဖော်စပ်ထားသည့်အတွက် ချွတ်ရခက်သည့် ဖုန်၊ရွှံ့၊ဆီချေး နှင့် ဘရိတ်မှုန်နှင့် ဆေးဟောင်းများအား မည်သည့်တာယာအမျိုးအစားတွင်မဆို ဖျန်းပြီးသုတ်လိုက်ရုံဖြင့် အလွယ်တကူဖယ်ရှားပေးသည်။ တာယာကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ သန့်စင်မှုကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းပေး ....
ARPET & UPHOLSTERY
Mothers ၏ ကော်ဇောနှင့် ကူရှင်ချည်သားရက်ထည်အမျိုးမျိုး သန့်စင်ဆေးသည် သင့်ကားအတွင်းခန်း၏ အရောင်အစစ်အမှန်နှင့် ပင်ကိုစရိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ဖော်ပြပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ဇောနှင့် ကူရှင်သန့်စင်ဆေးသည် pH ညီမျှမှုရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှုကင်းသည့်အပြင် သင်၏ဗီနိုင်း၊ ကတ္တီပါ၊ ချည်ထည်၊ ကော်ဇောနှင့် ....
Mothers ၏ Protectant သည် ရာဘာ၊ဗီနိုင်း၊ ပလပ်စတစ်နှင့် ဖိုင်ဘာဂလပ်စ်တို့ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ် မှ အတွင်းပိုင်းထိ ဖောက်ထွင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ရက်ပေါင်း ၃၀ ထိ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်သည်။ ဒက်ရ်ှဘုတ်၊ ဘမ်ပါ၊ တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၊ တာယာများနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို ....
ဤသားရေပြုပြင်ဆေးရည်သည် သင်၏ သားရေအချောအထည်ကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အညစ်အကြေးများဆေးကြောသန့်စင်ထားသည့် သားရေပစ္စည်းများကို သင်သည် နောက်ထပ် ပေကျံစေလို မည်မဟုတ်ပါ။ သက်တမ်းကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ သားရေပစ္စည်းများ၏ သဘာဝအဆီများ ခန်းခြောက်သွား ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးရန် လင်နိုလင်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက် အဆီများဖြင့် ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ....
၎င်းမှာ သားရေအချောထည်များ အတွက် အကောင်းဆုံးသန့်စင် ဆေးရည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုမှုအလွန်များပြားသည့် သားရေ အတွင်းခန်းပစ္စည်းများ၊ အမိုးဖွင့်ကား၏ သားရေမိုးများနှင့် အခြားမည်သည့်သားရေမျိုးကိုမဆို ပုံမှန်ဆေးကြောပေးရမည်။ သားရေသည် သဘာဝပစ္စည်းဖြစ်၍ ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ Mothers ၏ သားရေသန့်စင်ဆေးရည်ကို ဓာတုဗေဒပညာရှင်များက pH ....
Mothers ၏ VLR သည် ဗီနိုင်း၊ သားရေနှင့် ရာဘာမျက်နှာပြင်မျိုးစုံကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ သန့်စင်ပေး၊ ပြုပြင်ပေးပြီး ကာကွယ်ပေးသည်။ ပိုမိုအားအင်ပြည့်ဝစေပြီး pH ကိုညီမျှစေသည့် ဖော်မြူလာက အလွန်စွဲမြဲနေသည့် မြေသားအညစ်အကြေး၊ ရွှံ့နှင့် စွန်းထင်းမှုများကိုပင် ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးသည်။ ....
[SELECTION] 10W-40 SN/CF
[SELECTION] 10W-30 SM/CF
[SELECTION] 5W-30 SN/GF-5
No 23, Yadana Street, 16/2 Ward, Thingangyun Township, Yangon, Myanmar.
Hot Line : 01-8551324, 01-8551423
Mobile : 09 420001599
Monday - Saturday : 9:00 AM to 5:30 PM
Day Off Sunday
© 2017-2022 Steadfast Trading Co., Ltd (Apex Auto Body Shop). All Rights Reserved.